मर्जरको चर्चा चलिरहँदा सेयर बजारको यात्रा ओरालोतिर, साताभरमा २ अर्ब ६३ करोडको मात्र कारोबार
Sat, Dec 7, 2019 at 9:04am
त्रिविका विद्यार्थीले एक लाखसम्म उपचार खर्च पाउने #आहा खबर# योजना ६३ करोडको, कोषमा रकम ५० लाख, बन्ला १०८ फिटको मूर्ति ? #आहा खबर# महिला क्रिकेटमा नेपाललाई काश्य कदक #आहा खबर# सार्क स्थापनाको ३५औँ वर्ष : १९औँ शिखर सम्मेलनको टुंगो कहिले लाग्ला ? यस्तो छ श्रृंखला... #आहा खबर# नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारका लागि गैँडाकोटका ३ हजार रुख काटिने #आहा खबर# किन मन पराउँछन् कटीहरु हाँसो–ठट्टा गर्ने केटा ? #आहा खबर# विजेता किरणसिंह बोगटी : लामो दूरीको म्याराथनमा नेपाललाई स्वर्ण #आहा खबर# धार्मिक मान्यता र आयुर्वेदमा दिउँसोमा सुत्न किन अनुचित ? #आहा खबर# महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा हुने #आहा खबर# शिक्षकको अभावका कारण प्रयोगमा आएन कम्प्युटर #आहा खबर# सामुद्रिक चक्रवात पवनको प्रभावले देशभर बदली #आहा खबर# सरकारद्वारा धान खरीद गर्न बजार भाउ निर्धारण, पालो कुर्दै किसान #आहा खबर# १३ औं सागको सातौं दिन : १८ खेलमा प्रतिस्पर्धा #आहा खबर# कसरी हुन्छ निमोनिया ? यस्ता छन् बच्ने उपाय #आहा खबर# औषधिजन्य तातोपानी कुण्डमा नुहाउनेको घुइँचो #आहा खबर#
शनिबार, २८ आषाढ २०७६,	आहाखबर
वित्तीय क्षेत्रमा ठूला बैंकहरुको मर्जरको विषय चर्चा चलिरहँदा सेयर बजार भने निरनतर ओरालो लागेको छ । ठूला बैंकहरुको मर्जर (बिग मर्जर) को चर्चासँगै वाणिज्य बैंकको सेयर खरिद बिक्रीमा आकर्षण देखिए पनि सेयर कारोबार नेप्से परिसूचक भने उकालो लाग्न सकेको छैन ।
बिग मर्जरको चर्चा शुरु भए देखिका अधिकांश दिनहरुमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ । गत आइतबारदेखि बिहीबारसम्मको अवस्था पनि उस्तै देखियो । यो साताभर सेयर बजारमा उतार चढावपूर्ण कारोवार भयो । सातामा पाँच दिन खुलेको बजारमा कूल १७३ कम्पनीको एक करोड १३ लाख ८७ हजार ६१६ कित्ता सेयर रु दुई अर्ब ६३ करोड ६८ लाख ९५ हजार १२७ मूल्यमा खरीद बिक्री भए ।
गत साताको अन्तिम दिन अर्थात् १९ गते बिहीबार आठ अङ्कले घटेर एक हजार २६०.४७ मा झरेको बजार यस साताको पहिलो दिन आइतबार कारोवारमापक नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ४.४५ बिन्दुले घटेर एक हजार २५६.०४ बिन्दुमा पुग्यो ।
कूल १७३ कम्पनीको २२ लाख १६ हजार ४९३ कित्ता सेयर रु ५४ करोड पाँच लाख २९ हजार ४६५ मा खरीद बिक्री भए । सोमबार पनि सेयर बजारमा कारोवारमापक नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्ने क्रम जारी रह्यो । सो दिन नेप्से परिसूचक ८.७० विन्दुले घटेर एक हजार २४७.३५ विन्दुमा पुग्यो । नेप्से घट्दा कारोवार रकम भने झण्डै रु ६० करोडको हाराहारीमा रह्यो ।
कूल १७१ कम्पनीको २९ लाख १० हजार १५३ कित्ता सेयर रु ५९ करोड १० लाख ५३ हजार ८१२ मूल्यमा कारोवार भयो । कारोवार मापक नेप्से परिसूचक मङ्गलबार भने उकालो लाग्यो । उतारचढावकाबीच परिसूचक २.९२ अङ्कले बढेर एक हजार २५०२७ मा पुगेर थामियो । परिसूचक बढे पनि कारोवार रकममा भने खासै प्रगति देखिएन । स्टकका अनुसार आज १६५ कम्पनीका १६ लाख सात हजार ६७२ कित्ता सेयर रु ४६ करोड ८२ लाख ६३ हजार ७७० मा खरीद–बिक्री भए ।
मङ्गलबार उकालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबार भने ओरालो लाग्यो । उतारचढावकाबीच नेप्से परिसूचक १.१२ अङ्कले घटेर एक हजार २४९.१५ मा पुगेर रोकियो । सो दिन कूल १६८ कम्पनीका २९ लाख ९८ हजार ९४७ कित्ता सेयर रु ५७ करोड ३४ लाख ४७ हजार ५०९ मा खरीद बिक्री भए ।
परिसूचक ओरालो लाग्दा कारोवार रकम पनि औशतमा समेटिएको छ । कूल १७२ कम्पनीको १६ लाख ५४ हजार २५१ कित्ता सेयर रु ४६ करोड ३६ हजार ५७१ मा कारोवार भए ।